इरानले दर्जनौ आ’क्र’मण गरेलगत्तै ट्रम्पले बोलाए उच्च सुरक्षा बैठक, फर्काए यस्तो कडा चेतावनी, अब के होला ? — Sanchar Kendra
इरानले दर्जनौ आ’क्र’मण गरेलगत्तै ट्रम्पले बोलाए उच्च सुरक्षा बैठक, फर्काए यस्तो कडा चेतावनी, अब के होला ?
काठमाडौं । इराक स्थित आफ्ना २ सैन्य अड्डामा इरानले मिसाईल आ’क्र’मण गरे लगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अमेरिकी उच्च सुरक्षा अधिकारीसँग बैठक गरेका छन् । ह्वाइट हाउसमा भएको आपतकालिन बैठकमा अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओ, रक्षामन्त्री मार्क स्पर्स तथा अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्स सहभागि थिए । बैठक पछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भनिएको थियो तर अब नगर्ने भएका छन् । साथै, ह्वाईट हाउसले थप कुनै पनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगर्ने समाचार माध्यमले जनाएका छन् ।
अमेरिकाका रिपब्लिकन सिनेटर लिन्ड्से ग्राहामले इरानको मिसाईल आ’क्र’म’णलाई अमेरिका वि’रु’द्ध’को यु’द्धको हर्कत भएको बताएका छन् । उनले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई यु’द्धको अवस्थामा यथोचित कदम चाल्न कानूनले प्रशस्त अधिकार दिएको पनि बताएका छन् । इरानका विदेशमन्त्री जादव जाविदले आफ्नो मुलुक वि’रु’द्ध आ’म’ण गर्न प्रयोग गरिएका अमेरिकी सैन्य निशानामा समानान्तर आक्रमाण गरी इरानले आत्मरक्षा गरेको बताएका छन् ।
जाविदले अमेरिकी सैन्य अड्डामा आफ्नो सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघको आत्मरक्षा सम्बन्धि कानून अनुसार आ’क्र’मण गरेको दाबी गरेका छन् । साथै उनले यु’द्धलाई थप नभड्काउने तर अमेरिकाका तर्फबाट भड्किए आत्मरक्षा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गर्दै इरानले दुईवटा अमेरिकी निशानामा आ’क्र’मण गरेको र क्षतिको विवरण संकलन जारी रहेकाले अमेरिकाको स्थानीय समय बुधबार बिहानमात्र औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । उनले अमेरिकासँग शक्तिशाली स्रोतसाधनयुक्त सेना रहेको समेत स्मरण गराएका छन् ।
यस्तै इरानले इराकस्थित हवाई आधारमा दजनौं मिसाइल आक्रमण गरेपछि मङ्गलबार तेलको मूल्यमा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । अघिल्लो हप्ता अमेरिकी ड्रोन आ’क्र’म’णमा शीर्ष इरानी कमाण्डरको मृ’त्युको बदलामा इरानले मिसाइल आ’क्र’म’ण गरेका हो । इरानको आ’क्र’म’णपछि अमेरिका र इरानबीच यु’द्ध भड्किने चिन्तामाझ तेलको मूल्य बढेको हुन सक्छ । अमेरिकी कच्चा तेल मङ्गलबार ४ प्रतिशले बढेर ६५ डलर पुगेको छ । आ’क्र’म’ण प्रति ६२.७० डलर मुल्य रहेको कच्चा तेलको मुल्य बढेर ६५.४८ पुगेको छ । उलेख्नीय कुरा मंगलबारको मिसाइल आ’क्र’म’णको जिम्मा इरान आफैले लिएको छ । यस अघिका मिसाइल आक्रमणको जिम्मेबारी इरान पक्षधर मिलिसिया समूहले लिने गर्थे ।
अमेरिकी र’क्षा मन्त्रालय पेन्टागनले आ’क्र’मण’को पुष्टि गर्दै आक्रमणमा ब्यालेष्टिक मिसाइल प्रयोग गरिएको र ती इराकभित्रैबाट प्रहार गरिएको जानकारी दिएको छ । आ’क्र’म’णमा परेका दुईमध्ये एक हवाई आधारमा विगतमा डोनाल्ड ट्रम्पले भ्रमण गरेका थिए । पेन्टागनले हाल आफूहरुले आ’क्र’म’णले पु¥याएको क्षतिको मूल्याकंन गरिरहेको बताएको छ । मुल्यांकनपछि अमेरिकी कर्मचारी र त्यस क्षेत्रका सम्पूर्ण मित्रहरुको ‘प्रतिरक्षा र सुरक्षाको लागि सम्पूर्ण अत्यावश्यक कदम उठाउने’ पेन्टागनले बताएको छ । यसअघि ट्रम्पले सुलेमानीको ह”त्याको बदलामा इरानले आक्रमण गरेमा इरानमाथि जवाफी प्रहार गर्ने वाचा गरेका थिए ।
इरान र अमेरिकाको यु’द्ध भएमा मध्य–पूर्वको तेल आपूर्तिमा नराम्रो धक्का लाग्ने भएकाले लगानीकर्ता उच्च सतर्क अवस्थामा छन् । तेलको मुल्यमा अचानकको वृ’द्धि विश्व अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्नेछ । पछिल्लो समय कमजोर उत्पादन गतिविधिका कारण संघर्षरत विश्व अर्थतन्त्रको लागि यो राम्रो संकेत होइन । यताअमेरिकाले न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमण गर्न लागेका इरानी विदेशमन्त्रीलाई प्रवेशाज्ञा दिन अस्वीकार गरेको विवरण आएको छ। त्यो निर्णयले विदेशी नेताहरूलाई प्रवेशाज्ञा दिने सन् १९४७ मा गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मुख्यालय सहमतिको उल्लङ्घन गर्छ। इरानी विदेशमन्त्री जावाद जरिफले बिहीवार हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को बैठकमा बोल्न चाहेका थिए।
यसैबीच इरानको संसद्ले अमेरिकी सेना र पेन्टागनलाई आ’’त’ङ्क’वादी सङ्गठन घोषणा गर्ने एउटा प्रस्ताव पारित गरेको छ। इरानी संसद्ले विदेशी भूमिमा कार्य गर्ने कूड्स फोर्सका लागि अतिरिक्त रकम विनियोजन गरेको छ। इरानको दक्षिणपूर्वी नगर केर्मानमा भेला भएका मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्दै इरानको रेभलूशनरी गार्ड्स (आईआरजीसी) का प्रमुख हुसेन सलामीले भने, “शहीद कासिम सुलेमानी अहिले अझ शक्तिशाली भएका छन्… अहिले उनको मृ’त्यु भएको छ।”
श’व’यात्रामा सहभागीहरूले अमेरिका र ट्रम्पविरोधी नारा लगाएको संवाददाताहरूले बताएका छन्। “उनी सुलेमानी] जनताको सेवा गर्न तत्पर महापुरुष मानिन्थ्य । उनको हत्याको प्रतिशोध लिनैपर्छ,” एक १८ वर्षीय विद्यार्थीले एक समाचार संस्थालाई बताए। सोमवार सर्वोच्च नेता आयतूला अलि खामनेईले तेहरानमा सुलेमानीको श’वयात्रामा प्रार्थना गरेका थिए। उनलाई सुलेमानीको श’वपे’टिकामा आँशु झार्दै गरेको देखिएको थियो। इरानको सरकारी टेलिभिजनले दशौँ लाख मानिसहरू सुलेमानीको श’व’यात्रामा सहभागी भएको जनाएका छन। मानिसहरूको भिड अन्तरिक्षबाट खिचिएको तस्बिरमा पनि देखिएको छ। इरानमा इस्लामिक प्रणालीको र’क्षा गर्न चार दशकअघि आईआरजीसीको गठन भएको थियो।
त्यसयता उक्त समूह एउटा महत्त्वपूर्ण सैन्य, राजनीतिक र आर्थिक बलको रूपमा स्थापित भएको छ। कूड्स फोर्स आईआरजीसीअन्तर्गत छ। उसले विदेशमा गोप्य गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। झन्डै ५,००० जना भएको कूड्स फोर्स जनरल सुलेमानीको नेतृत्वमा थियो। उनले इरानका सर्वोच्च नेताबाट सोझै निर्देशन लिने गरेको थिए। यता इरानी विदेशमन्त्री जावाद जरिफले अमेरिकाले इरानी सैन्य नेता कासिम सुलेमानीको ह’त्या गरेर द्व’न्द्व’को बाटो रोजेको बताएका छन्। एक अन्तर्वार्तामा उनले सुलेमानीको ह’त्या ‘यु’द्धकार्य’ भएको र त्यसयता अमेरिकी अधिकारीहरूले सार्वजनिक र व्यक्तिगतरूपमा ‘रूखो, मूर्खतापूर्ण र हठी’ सन्देश प्रवाह गरेको बताएका छन्।
उनलाई न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमण गर्न प्रवेशाज्ञा दिन अस्वीकार गरेर अमेरिकाले सन् १९४७ मा गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयको सहमतिको उल्लङ्घन गरेको छ। इरानी विदेशमन्त्री जावाद जरिफले बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :- के संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बोल्न जान तपाईँलाई भिसा दिन अस्वीकार गरिएको हो? भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन् – ‘हामीहरूलाई महासचिवले त्यही भने तर विदेशमन्त्री पोम्पेओले भने आफूहरूसँग मेरो भिसा हेर्नको लागि पर्याप्त समय नभएको बताए। जबकि मेरो निवेदन सन् २०१९ मै भएको हो, सन् २०१९ को डिसेम्बरमा।’
तपाईँले त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिदै उनले भनेका छन् – ‘हेर्नुस् मैले तपाईँसँग यसलाई राष्ट्रसङ्घ मुख्यालय सम्बन्धी सम्झौताको उलङ्घन भन्न सक्थेँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान नगर्ने, यु’द्ध अपराध गर्ने र सांस्कृतिक स्थलहरूमा हमलाको ध’म्की दिएर थप यु’द्ध अपराध गर्न खोज्ने—जुन यु’द्ध अ’प’राध नै हो। म उनीहरूबाट कुनै प्रतिबद्धतामा कायम रहने कुरा आशा गर्न सक्दिन। त्यसैले यो अनपेक्षित होइन।
तर मेरो प्रश्न चाहिँ उनीहरू किन डराए? भन्ने हो। म न्यूयोर्क पुगेर के नै गर्थेँ र? भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन् – ‘तपाईँसँग साँच्चिकै नढाटी भन्नुपर्दा मैले यो भ्रमणका बेला अमेरिकासँग कुनैखाले संवादमा संलग्न हुने आशा गरेको थिइँन। तर त्यसबेला म स्वतन्त्र विज्ञ समूहहरू, पत्रकारहरूसँग थप प्रस्ट्रताका लागि… र हुनसक्छ तनाव मथ्थर पार्न। किनभने यो त डरलाग्दो समय बनेको छ।
मलाई लाग्दैन अमेरिकाले तनाव मथ्थर पार्ने बाटो समातेको छ। अमेरिकाले थुप्रै मानिसहरू मारेको छ, निकै महत्वपूर्ण मानिसहरू नै, विदेशी भूमिमा इराकी र इरानी अधिकारीहरू दुवैलाई। यो युद्धकार्य हो। यसले आन्तरिक र सार्वजनिक वृत्तमा दिएको सन्देश निकै रूखो, मूर्खतापूर्ण र हठी छ। त्यो आफैँमा तनाव बढाउने काम हो।
त्यसले इरानी जनतालाई त्रासमा पारेको छ। मलाई लाग्छ विदेशमन्त्री पोम्पेओले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई गतल सूचना दिइरहेका छन्। उनी त ठान्छन् तेहरान र बग्दादका सडकमा मानिसहरू नाचिरहेका छन्। उनले त ट्वीटरमा त्यसको सानो भिडियो पनि राखे। अहिले म विश्वस्त छु उनले हिजो बग्दाद र तेहरानमा मानव सागर देखे होलान्।
अमेरिकाले जे गरिरहेको छ त्यसले स्वभाविक रूपमा आफ्नो बाटो लिनेछ। उसले पहिले इराकको सार्वभौमसत्ताको उलङ्घन गर्यो र त्यसको जवाफ इराकी संसद्ले दियो। उसले यस क्षेत्रका धेरै मानिसहरूको भावनामा ठेस पुर्‍यायो- जसलाई रोक्नु इरानको काबुमा थिएन। उसले थुप्रै इरानी नागरिक र अधिकारीहरूलाई मारेको छ। यो आ’तङ्वा’दी कारबाहीजस्तो यु’द्ध हो। इरानले त्यसको उपयुक्त कदम लिनेछ। अमेरिकाले अब यसको नतिजाहरू व्यहोर्नेछ र मलाई लाग्छ त्यो सुरु नै भइसकेको छ। हाम्रो क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थितिको अन्त्य गर्ने काम सुरु भइसक्यो।
हामीले भनेका छैनौँ कि हामी सीमाहरूको सम्मान गर्ने छैनौँ। हामीले भनेका हौं कि त्यहाँ आधारभूत सीमाहरू बाँकी छैनन्। यी कदमहरू उल्टिन सक्छन् किनभने योबारे सबै पक्षले खुल्ला रुपमा छलफल गरेका हुन्। र अमेरिका त्यसबाट पछि हट्यो र युरोपेलीहरू पनि यसभित्रै वा बाहिर रहेर पनि आफ्ना सम्झौताहरू पालना गर्न विफल बने।
हामीले उपलब्ध गराइएको संरचनाबारे कानुनसम्मत तरिकाबाट, कानुनको परिधिभित्र रहेर, सहमतिभित्रै रहेर र उल्लङ्घन भएको अवस्थामा त्यसका उपायहरू सहमतिमा उल्लेख गरिए अनुसार नै चाल्ने भनेर यसबारे वक्तव्यमार्फत् होइन, लेखेर पाँचपटक जानकारी गरायौं। र उनीहरूले सम्झौतामा रहेर आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न थाले भने यी तत्कालै उल्टाउने पनि सकिन्छ।
त्यसैले जेसिपीओए सहमति सजीव छ किनभने यो एकदमै यथार्थपरक सम्झौता हो। तर तपाईँलाई थाहा छ को चाहिँ निर्जीव छ? अत्यधिक तनाव किनभने यो पटक पटक विफल भएको छ। र अर्को निर्जीव भएको कुरा भनेको हाम्रो क्षेत्रमा अमेरिकाको उपस्थिति हो। मलाई लाग्दैन कि अमेरिकालाई यो क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति राख्नु अब सम्भव छ।